Fitehirizam-boky Malagasy (1965-2022)
Fitaovana natao hikarohana ao amin'ireo boky amin’ny fiteny samihafa navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah izy ity.
Jereo ao amin'ny jw.org raha te haka boky.
Fiteny vaovao misy: Bembe
Alakamisy 13 Janoary
Fantatsika fa avy amin’Andriamanitra isika.​—1 Jaona 5:19.
Manaja ny anabavy i Jehovah, ka avelany hitondra ny anjara birikiny ao amin’ny fiangonana ry zareo. Modely ry zareo satria hendry, manam-pinoana, be zotom-po, be herim-po, malala-tanana, ary manao asa tsara hafa. (Lioka 8:2, 3; Asa. 16:14, 15; Rom. 16:3, 6; Fil. 4:3; Heb. 11:11, 31, 35) Sambatra koa isika manana zokiolona be dia be. Marary ny maro amin’izy ireny satria efa mihantitra. Manompo araka izay vitany anefa ry zareo, ary manao izay tratry ny heriny mba hampaherezana sy hampiofanana ny hafa. Mahasoa antsika koa ny traikefan-dry zareo. Tena tsara tarehy amin’i Jehovah ny zokiolona, dia hoatr’izany koa no fahitantsika an-dry zareo. (Ohab. 16:31) Ary ahoana ny ankizy sy ny tanora? Be dia be ny olana atrehin-dry zareo satria mihalehibe eto amin’ity tontolo ity ry zareo, nefa fehezin’i Satana sy manaraka ny toe-tsainy izy io. Tena mampahery antsika rehetra àry ny mahita an-dry zareo mamaly any am-pivoriana, dia mandray anjara amin’ny fanompoana, ary be herim-po rehefa miaro ny finoany. Matokia rankizy sy ry tanora fa tena ilaina ao amin’ny fiangonana ianareo!—Sal. 8:2. w20.08 21-22 § 9-11
Fandinihana ny Soratra Masina Isan’andro—2022
Maniraka anareo aho ... hoatran’ny maniraka ondry ho eo afovoan’ny amboadia.​—Mat. 10:16.
Mety hiatrika olana hoatran’ny tafio-drivotra isika raha vao manomboka mitory sy mampahafantatra hoe Vavolombelon’i Jehovah isika. Mety hanohitra, ohatra, ny fianakaviantsika ary mety haneso antsika ny olom-pantatsika. Ny olona itoriana indray mety tsy hihaino. Inona no hanampy anao ho be herim-po? Voalohany, matokia fa mbola mitarika ny asa fitoriana i Jesosy. (Jaona 16:33; Apok. 14:14-16) Faharoa, miezaha hatoky kokoa hoe hitana ny teniny i Jehovah ka hikarakara anao. (Mat. 6:32-34) Vao mainka ianao ho be herim-po rehefa mitombo ny finoanao. Tena manam-pinoana ianao matoa nahavita niteny tamin’ny havanao sy ny olom-pantatrao hoe mianatra Baiboly amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ary manatrika ny fivorian’izy ireo. Azo antoka hoe nisy fiovana be nataonao mba hanarahana ny fitsipik’i Jehovah, ohatra hoe tamin’ny toetranao sy ny fomba fiainanao. Tsy ho nahavita an’izany koa ianao raha tsy nanam-pinoana sy be herim-po. Matokia fa rehefa miezaka ho be herim-po kokoa ianao, dia “hanampy anao i Jehovah Andriamanitrao na aiza na aiza alehanao.”—Jos. 1:7-9. w20.09 5 § 11-12
Asabotsy 15 Janoary
Nataon’i Jehovah milamina ny taniny.​—2 Tan. 14:6.
Tena ohatra tsara ho antsika i Asa Mpanjaka. Hendry mantsy izy satria niantehitra tanteraka tamin’i Jehovah. Tsy hoe rehefa tojo ny mafy ihany izy vao niantehitra taminy, fa na dia rehefa nilamina koa aza ny fiainany. Efa hatramin’ny ela no “nanompo an’i Jehovah tamin’ny fony manontolo i Asa.” (1 Mpanj. 15:14) Ahoana no nampisehoany an’izany? Nesoriny tanteraka tao Joda, ohatra, ny fivavahan-diso. Milaza ny Baiboly hoe “nesoriny ireo alitaran’ny firenen-kafa sy ireo toerana avo, dia nopotipotehiny ireo tsangambato masina, ary nokapainy ireo tsato-kazo masina.” (2 Tan. 14:3, 5) Na i Maka renibeny aza nesoriny tsy ho andriambavy, satria nampirisika ny olona hanompo sampy. (1 Mpanj. 15:11-13) Tsy nanala ny fivavahan-diso fotsiny i Asa. Nampirisika ny olona hanaraka ny fivavahana marina koa izy, satria nanampy ny mponin’i Joda mba hiverina amin’i Jehovah. Notahin’i Jehovah i Asa sy ny vahoaka ka nilamina ny fiainan-dry zareo. “Tsy nisy nanakorontana ilay tany” nandritra ny folo taona.—2 Tan. 14:1, 4, 6. w20.09 14 § 2-3